Maitiro ekuwedzera Waze kana Google Mepu kuCarPlay | Ndinobva mac
Kana iwe wakateedzera nhau dzemazuva mashoma apfuura, iwe uchaziva kuti Apple CarPlay inovhura kune mamwe mamamepu. Parizvino, uye pasi peiyo iOS 11 vhezheni izvi hazvigoneke. Kana iwe uchida mepu, iyi inofanira kunge iri Apple Mepu. Nekudaro, nekuuya kweIOS 12 zvinhu zvichachinja uye zvimwe zvinoshandiswa seGoogle Mepu kana yakakurumbira Waze browser inogona kuwedzerwa.
Ichokwadi kuti iyo yekupedzisira vhezheni yeplatform haizosvika kune vashandisi kusvika munaGunyana anotevera. Nekudaro, iyo yekutanga beta yevagadziri iri inowanikwa kubva munaJune 4 y beta yeruzhinji yekutanga ichaita pakupera kwemwedzi uno waChikumi. Naizvozvo, pachave nemabasa aunogona kuedza kare - kana ukashinga - pane chako chishandiso.
Naizvozvo, chinhu chekutanga chaunofanira kuita ndeche gadza beta yekutanga yeIOS 12 pane yako iPhone; Kana iwe ukaita nhanho dzakafanana neIOS 11.4 hazvizogoneke, kunyange zvichizokubatsira iwe kuwedzera kana kudzima zvimwe App kubva pane yako screen screen. Saizvozvowo, kwete ese maapplication anoenderana neCarPlay; kana zvirizvo, zvinoonekwa zvakananga pachiratidziri. Zvino, hazvizove zvinokwanisika kuwedzera chero eaya maviri maGPS ekufambisa sarudzo, ndiko kuti, kana Waze kana Google Mepu.
Chekutanga pane zvese, musoro kune «Zvirongwa» yeiyo iPhone uye tsvaga iyo sarudzo "General". Mukati unofanira kufamba kusvika wasvika "CarPlay" uye dzvanya zvakare. Uchaona kuti ichakutendera kuti usarudze mota yaunoda kuwedzera maapplication maviri - runyorwa ruzere rwemotokari dzawakanyoresa kana kubatanidza ne iPhone yako dzinozoonekwa.
Ichave iyo nguva iyo iwe uchamiririrwa pachiratidziro kuti CarPlay yaizotaridzika sei mumotokari yako uye nemashandisirwo akawedzerwa. Pazasi iwe uchaona iwo anowirirana maapplication asina kuwedzerwa uye ayo anofambidzana neiyo diki icon (+) iyo inovawedzera ivo kune iyo runyorwa. Izvi ndizvo zvaunofanira kuita neWaze kana Google Mepu kuti ugone kunakidzwa nazvo muCarPlay.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuwedzera Waze kana Google Mepu kuCarPlay
Vakomana, izvi hazvigoneke parizvino, iwe unofanirwa kujekesa kuti muBeta - kwete kuti inowanikwa ...
Izvo hazvishande kwandiri kana. Kana pa iPhone X kana pa 6. Zvese zviri zviviri neIOS12 Beta 1 uye neWaze neGoogle Mepu yakaiswa.
Kwete kushanda paios 12 beta 2
Pindura kuna josiamoni
Chikunguru C akadaro
Kwete kushanda muBeta 3
Pindura Julio C.
Kwete kushanda beta 8
Mhoro. Ini ndichangobva kuisa iO12, Waze kana Google Mepu hazvioneke nechiratidzo + chekuvawedzera kuCar Play yangu. Chero zano? Ndatenda!